Hahazo sakafo any an-dakilasy ny mpianatra 21 000 avy amin’ny EPP 60 any amin’ny faritra Androy, Anosy ary Atsimo Andrefana, araka ny fanambaran’ny Fandaharanasan’ny Firenena mikambana momba ny sakafo (Pam), omaly. Any an-toerana ihany no vidiana ny akora hampiasaina eny amin’ny toeram-pisakafoana hanampiana ny mpamboly sy hampiroboroboana ny varotra anatiny. Hanampy amin’ny fitantanana mahomby ny toeram-pisakafoana ny Pam sy amin’ny fanomezana kojakoja hampiasaina hampihodinana azy. Miara-miasa koa ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena amin’ny fanatontosana ny tohana ara-tsakafo an-dakilasy. Ankoatra izay, vokatry ny fanohanan’ny Banky iraisam-pirenena, i Norvezy… afaka hizara sakafo ho an’ny ankizy 265 000 eto Antananarivo, i Toamasina sy Toliara ny Pam.
Tsy mbola hisy rotsak’orana eto Antananarivo sy ny manodidina ao anatin’ny hateloana, araka ny fanazavan’ny teknisianina eny amin’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Alizay tsy marin-toerana no mandrafitra ny toetry ny andro manerana ny Nosy. Hahazo orana ny tapany atsinanana sy andrefana. Momba ny fandatsahana orana ny faran’ny herinandro lasa teo, kely ny vokatra azo noho ny tsy fahatomombanan’ny fepetra rehetra takina. Mbola mitoetra kosa ilay faritra ahina hivadika ho rivodoza any amin’ny tapany avaratry ny Nosy ary arahi-maso ny fivoarany. Eto Analamanga anio, ho maloka ny andro ny tapak’andro hariva ary hahatratra 15°C ny maripana ambany indrindra eto Antananarivo, 28°C ny ambony indrindra.
« Nanomboka ny taona 2014, fotoana nambolena hazo teo amin’ny station forestière Marohogo ao amin’ny kaominina Belobaka, Mahajanga II, 50 ha ny velaran-tany voavoly, 80% amin’ny natsatoka, naniry avokoa », hoy ny talem-paritry ny tontolo iainana ao Boeny, Rakotoarimanana Josette, nandritra ny fisantarana ny taom-pambolen-kazo ny faran’ny herinandro teo. Karazan-kazo fitrandraka avadika ho arina fandrehitra ( bonara mena, pamba…) no novolena amin’ny velarana 7 ha. Nandray anjara tamin’ny hetsika avokoa ny olona mivelona mivantana na tsia amin’ny hazo, nahitana ny mpandraharaha, mpandrafitra, mpanondrana hazo, mpitatitra saribao, mpianatra ary ny mpiasa amin’ny sampandraharaha maro ao Boeny. Manana tanjona ny handrakotra velarana 10 000 ha amin’ny voly hazo, hoy ny préfet an’i Mahajanga.